Akụkọ - Ihe ize ndụ na mgbochi mberede nke piston air compressor
Ịdị ọcha nke ikuku na-ezo aka na mmiri nke ikuku compressor.A na-abanye ikuku n'ime nzacha ikuku site na ụlọ elu mmiri dị elu 25m.A na-eme ka ikuku dị ọcha site na akpa akwa nzacha agịga wee gaa na compressor ikuku.A na-ejikọta ikuku a kpochara na 0.67mpa na ikuku compressor, na-asachapụ ma mee ka ikuku dị jụụ site na ụlọ elu ikuku, ma zigara ya na sieve molecular maka mgbasa ozi iji wepụ mmiri, carbon dioxide na hydrocarbons ndị ọzọ.
Ihe ize ndụ ọkụ na mgbawa na usoro nke ịdị ọcha na mkpakọ ikuku bụ nke kachasị:
1) Mmetụta nzacha nke nzacha ikuku adịghị mma, na uzuzu dị n'ime ikuku buru ibu, nke dị mfe ịmepụta carbon;Mmetụta mgbasa ozi nke sieve molecular na-ebelata, nke mere na hydrocarbons na-abanye na kọlụm distillation na-esote, na oke nchịkọta nwere ike iduga combustion na mgbawa;
2) Enwere ihe dị njọ na usoro mmiri jụrụ oyi.Mmiri jụrụ oyi nkeikuku compressorkwụsịrị, mmiri adịghị ezuru ma ọ bụ mmiri okpomọkụ dị oke elu, mmetụta dị jụụ adịghị mma, na okpomọkụ dị na compressor dị oke elu, na-eme ka ọkụ ọkụ nke mmanụ dị nro, nke na-emepụta carbon deposition na compressor bearing. ohia, cylinder, valvụ ikuku, ọkpọkọ iyuzucha, ngwa nju oyi, ihe nkesa na tankị nchekwa.Nkwenye carbon bụ ụdị ihe na-ere ọkụ, nke nwere ike iduga na ntinye carbon na ọkụ ọkụ n'onwe ya n'okpuru okpomọkụ dị elu, mmetụta ígwè ọrụ na mmetụta ikuku, mgbe ntinye nke carbon oxides (dị ka CO) ruru njedebe nke ịgbawa ọkụ, ọkụ na ịgbawa ga- ime.
3) Oil injection mgbapụta ma ọ bụ ezigbo mmanụ usoro mmejọ.Mmejọ nke mmanụ injection mgbapụta ma ọ bụ ezigbo mmanụ usoro nkeikuku compressornwere ike ibute enweghị ma ọ bụ nkwusioru nke inye mmanụ dị nro.Nsogbu dị mma nke mmanụ dị nro nwere ike ime ka ọ ghara ịdị mma.Esemokwu igwe na kpo oku nke Compressor na-aghọ ihe mgbanye ọkụ na mgbawa nke sistemu ikuku.Ịdị ọcha nke ikuku na-ezo aka na mmiri nke ikuku compressor.A na-abanye ikuku n'ime nzacha ikuku site na ụlọ elu mmiri dị elu 25m.A na-eme ka ikuku dị ọcha site na akpa akwa nzacha agịga wee gaa na compressor ikuku.A na-ejikọta ikuku a kpochara na 0.67mpa na ikuku compressor, na-asachapụ ma mee ka ikuku dị jụụ site na ụlọ elu ikuku, ma zigara ya na sieve molecular maka mgbasa ozi iji wepụ mmiri, carbon dioxide na hydrocarbons ndị ọzọ.
Nyocha ihe ize ndụ na mmerụ ahụ na mgbochi nkeikuku compressor
Ihe na-adịghị mma nke compressor na akụkụ ya na-akwado nwere ike iduga ọdịda nke ikuku compressor ma ọ bụ mgbawa nke ikuku.ikuku compressor.
1, ize ndụ analysis na merenụ ntule nke ikuku compressor
(1) N'ihi na ikuku nwere ọrụ oxidation, karịsịa n'okpuru nrụgide dị elu, usoro njem na-enwe ọganihu dị elu, n'ihi ya, ihe ize ndụ nke usoro ahụ nwere ọ bụghị nanị ihe ize ndụ nke oxidation (okpomọkụ), kamakwa ihe ize ndụ nke ịdị elu na-agba ọsọ na esemokwu. .N'ihi na cylinder, accumulator
Ụgbọ njem ikuku (nkuku ume) nwere ike ịgbawa n'ihi oke okpomọkụ na oke nrụgide.Ya mere, a ga-achịkwa okpomọkụ igwe nke akụkụ niile nke compressor n'ime oke ohere.
(2) Ngwakọta mmanụ na-amị amị atomized ma ọ bụ ihe ndị sitere na ya nwere ikuku akọrọ nwere ike ịkpata mgbawa.
(3) Akara mmanụ nke compressor adịghị emezu ihe ndị a chọrọ maka usoro dị nro ma ọ bụ ikuku ntinye ikuku, nke mere na ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke mmanụ na hydrocarbons na-abanye ma na-agbakọta n'ime akụkụ ndị dị ala nke usoro ahụ, dị ka flanges. valvụ, bellows na reducer.N'okpuru mmetụta nke gas dị elu, a na-eji nwayọọ nwayọọ na-eme ka atomized, oxidized, coking, carbonized na iche iche, na-aghọ ọnọdụ ndị nwere ike ịgbawa.
(4) The deliquescent ikuku, nonstandard ihicha nke usoro na nnọchi nke oyi na-ekpo ọkụ nwere ike ime ka nchara na n'ime mgbidi nke ọkpọkọ, bee n'okpuru mmetụta nke elu-ọsọ gas na-aghọ mgbanye isi iyi.
(5) Ọnọdụ na-adịghị akwụsi ike na nke na-arị elu na usoro mkpakọ ikuku nwere ike iduga na mberede ịrị elu nke ọkara okpomọkụ.Nke a bụ n'ihi mmetụta mgbochi adiabatic akụkụ nke mmiri (ikuku) n'ime usoro n'okpuru mmetụta mberede.
(6) Mgbe a na-arụzi na nrụnye, mmiri ọkụ na-enwu ọkụ dị ka ihe nchacha, kerosene na mmanụ ụgbọala na-adaba na cylinders, ikuku ikuku na ikuku ducts, nke nwere ike ibute mgbawa mgbe ikuku ikuku malitere.
(7) Ike n'ibu nke akụkụ abịakọrọ nke usoro mkpakọ adịghị ezute nkọwapụta.
(8) Nrụgide ikuku agbakwunyere karịrị iwu.Ọnọdụ ndị a dị n'elu nwere ike iduga nsogbu compressor ikuku ma ọ bụ mgbawa ikuku.
2. Mgbochi nke ikuku compressor mberede
(1) A ga-eme atụmatụ ikuku compressor na tankị na-akwado ya na usoro ọkpọkọ dịka nkọwa atụmatụ mba dị mkpa si dị.A ga-etinye ihe nzacha akọrọ n'ihu ọkpọkọ mmiri nke nnukwu ikuku compressor.
(2) Mgbe ikuku kpochara, okpomọkụ na-ebili nke ọma, na ikuku compressor ga-eji usoro jụrụ oyi dị irè.Maka usoro mmiri jụrụ oyi nke nnukwu ikuku compressor, ngwaọrụ mgbochi mgbochi mgbochi mmiri ga-agbanwe na ntụkwasị obi.Ọ bụrụ na mmiri na-akwụsị mgbe a na-arụ ọrụ, a na-amachibido mmiri na-amanye mmiri, ọ dịkwa mkpa ka a kwụsị ya maka ọgwụgwọ.
(3) Atụmatụ na ịrụ ọrụ nke tankị nchekwa ikuku ga-agbaso iwu nke ụkpụrụ nlekọta na nkà nchekwa nke ụgbọ mmiri nrụgide, na ihe ngosi nrụgide dị mkpa, ụkpụrụ nchịkwa na usoro mkpu ga-arụnye.Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, a ga-ahazi ngwaọrụ ejikọtara ọnụ.
(4) Nnukwu ikuku ikuku ga-eji ngwaọrụ mkpuchi mkpuchi dị ka ịwa ahụ, ịma jijiji, nrụgide mmanụ, mmiri na-enye mmiri, ntugharị ogwe na ibu okpomọkụ dịka njirimara akụrụngwa si dị.A ga-eme nnwale ikuku tupu ịmalite.
(5) Ikuku nwere ụfọdụ nrụgide nwere ike oxidizability.Ya mere, n'oge nchekwa na njem nke ikuku, a ga-egbochi mmanụ dị nro na ihe ndị ọzọ na-edozi ahụ ka ọ ghara ịgwakọta n'ime ya, iji gbochie mmanụ na ihe ndị ọzọ na-emepụta ihe na-eme ka ọ ghara ịdị na-ekpo ọkụ na ọkụ ma ọ bụ na-agba ọkụ na usoro.
(6) N'oge mmegharị ọsọ nke ikuku, nchara na adịghị arụ ọrụ nwere ike ịghọ ọkụ ọkụ.Ya mere, ọnọdụ na ịdị elu nke ntinye ikuku n'oge arụ ọrụ nke compressor ga-ezute ihe nchekwa chọrọ iji gbochie ntinye nke ihe ndị mba ọzọ.
(7) N'ihe banyere mmegharị ahụ na-adịghị mma na static n'oge arụ ọrụ nke ikuku compressor, kwụsị ozugbo maka nyocha na ọgwụgwọ.
(8) Mmalite oyi na-aga n'ihu nke nnukwu ikuku compressor ekwesịghị gafere ugboro atọ, na mmalite ọkụ ekwesịghị ịfe ugboro abụọ.
Oge nzipu: Nov-23-2021